‘गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा दिन सफल भएका छौं’ ⋆ ए टु जेड समाचार डट कम - ए टु जेड समाचार डट कम
‘गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा दिन सफल भएका छौं’
१३ फाल्गुन २०७५, सोमबार १५:२८
मेडिकल सिटीको रुपमा विकसित भएको भरतपुरमा अस्पतालहरु खुलेसंँगै प्रयोगशालाहरुपनि खुल्ने क्रम बढ्दो छ । केहीबर्ष अघिमात्र सरकारी अस्पतालको भरपर्नुपर्ने विरामीले अहिले विभिन्न नविनतम प्रविधि भित्रिएसंँगै नीजि अस्पतालमा विशेषज्ञ सुविधा सहितका सेवाहरु पाउने गरेका छन । यो संँगै भरतपुरलाई एउटा मेडिकल हबका रुपमा विकसित गर्ने उद्धेश्यले र व्यवसायिक रुपमा स्थापित हुने उद्धेश्यले विभिन्न ठाउँहरुमा प्रयोगशालाहरु खुल्नेक्रम पनि बढ्दो छ । देशकै केन्द्रभागमा रहेको भरतपुरमा विरामीहरुको चाप बढेसंँगै यहाँ दुई मेडिकल कलेज , दुई ठुला सरकारी अस्पतालका साथै दुइदर्जनभन्दा बढी नीजि अस्पतालमा सञ्चालनमा आएका छन । साथसाथै साना ठुला गरी परीक्षणका लागि खोलिएका ५० वटा भन्दा बढी प्रयोगशाला समेत सञ्चालनमा छन । यस ैभीडमा ३ बर्षदेखि विशिष्ट सेवा सुविधासहितको सीड ल्याबरोटरी सञ्चालनमा आएको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १० , एयरपोर्ट अगाडि अवस्थित यो प्रयोगशालाले नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा दिदै आइरहेको छ । प्रयोगशालामा दिइने सेवा, सुविधा, यहांँका बिशेषता लगायत अन्य बिषयमा केन्द्रीत रहेर सीड ल्याबोरोटरीजका अध्यक्ष हरि भूषालसंँग एटुजेड समाचार डटकमका लागि तयार पारिएको बिशेष कुराकानी ।
चितवनमा सीड मेडिकल ल्याबोरोटरिजको आबश्यकता किन महसुुस गर्नुभयो ?
चितवन हरेक किसिमको संभावना भएको जिल्लाको साथै देशकै केन्द्रभाग पनि हो । यहांँ कृषि,पर्यटन। शिक्षाको साथसाथै मेडिकल क्षेत्रको उत्तिकै ंसभावना छ । यसमध्ये मेडिकल क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय प्रयोगशाला परीक्षण हो । विना परीक्षण रोगको डायगोनिस हुदैन । त्यसैले यस जिल्लाका सेवाग्राहीको लागि एकै ठाउंँमा सबै प्रकारका प्रयोगशालाका सेवा दिने उद्धेश्यले यो प्रयोगशालको परिकल्पना गरिएको हो ।
हरेक अस्पताल र क्लिनिकले विरामीलाई आफ्नै प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने गर्छन त्यो प्रयोगशाला र यो प्रयोगशालामा गरिने परीक्षणमा के भिन्नता छ ?
कुनैपनि गुणस्तरीय सेवाको लागि व्यवसायकिता र बिशेषज्ञता हुनु जरुरी छ । अस्पतालले एकैठाउंँमा सबैप्रकारका स्वास्थ्य सेवा दिदा गुणात्मकता आउंँदैन । सेवामा बिशिष्टता पनि आउंँदैन र संभव पनि छैन । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील बिषयमा विरामी एवं सेवाग्राहीलाई छिटोभन्दा छिटो सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । यो सबै ठाउंँमा उपलब्ध पनि हुदैन । त्यसकारण हामीले सबै प्रकारका रोगको प्रयोगशाला परीक्षणको लागि धेरै ठाउंँमा विरामी भौतारिनु नपरोस भन्ने उद्धेश्यले सीड ल्याबेरेटरिजको स्थापना गरेका हौं । अन्य प्रयोगशालामा सबै सुविधा उपलब्ध हुदैनन तर हामीले बिशेष परीक्षणका लागि काठमाडौ एवं भारत पठाउनुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न प्रयोगशाला संचालनमा ल्याएका हौं । अर्को कुरा हामीकहांँ डिजिटील माइक्रस्कोप मेशीन छ जुन भ्याली भन्दा बाहिर यो सुविधा हामीले सेवा शुरु गरेका हौं । यस्तै ब्यामिनएक्सेस मेशील पहिलोपट भित्रयाएका छौ । हामीले यहांँ करीब ५० वटाभन्दा बढी नीजि अस्पतालबाट पठाइएका नमुनालाई प्रयोगशाला परीक्षण गरेर सेवा पनि दिइरहेका छौं । यहांँ विश्वमै प्रयोगमा ल्याइएका नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरिएकोले अन्य प्रयोगशाला भन्दा भिन्न छ ।
सेवाग्राहीको लागि यहांँ के कस्ता सेवा सुविधा पाइन्छन?
बिशेषगरी यहांँ रगत, दिशापिसाव,खकार,एफएन एसी,बायोप्सी, हर्मोन , एलर्जी, साइक्लोजि, क्यान्सर मार्कर, इन्जाइम तथा लागुऔषध सम्बन्धी परीक्षण गर्ने गरिएको छ । यससंँग सम्बन्धित ४२ प्रकारका एलर्जी परीक्षण, वातावरणबाट हुने डस्ट एलर्जी लगायतका परीक्षण उपलब्ध छ। अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रविधि यहांँ प्रयोग गरिएको कारण सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय सेवा दिन सफल भएका छौं । यसको साथै हामीले सेवाग्राहीको लागि अनलाइन सिष्टममार्फत डोरटुडोर सर्भिस दिइरहेका छौैं ।
सीडले यहांँ लगायत अन्य कुन कुन स्थानमा पनि आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ ?
सीडले चितवन लगायत अन्य स्थानमा शाखा विस्तार गरेको छ ।
हामीले आफ्नो गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा पुरयाउने उद्धेश्यले बुटवलमा शाखा विस्तार गरिसकेको छ भने भर्खरमात्र रत्ननगर टांँडीमा अर्को शाखा खोल्न सफल भएका छौ . आगामाी दिनमा अझ यसलाई विस्तार गर्दै अन्य जिल्लाहरुमा समेत शाखा खोल्ने तयारीमा छौं । हामीले यहांँबाट पनि चितवन नजिकका जिल्लाहरु गोर्खा, लमजुङ्ग, तनहुंँ, मकवानपुर नवलपरासी लगायतका जिल्लाहरुबाट आउने सेवाग्राहीलाई समेत अनलाइनबाट रिपोर्ट पठाउने गर्दछौं ।
यहांँ कति कर्मचारी एवं प्राविधिकहरु कार्यरत छन ।
खासगरी सीड ल्याबोरेटरीजमा मुख्य ६ जनाको संयुक्त लगानी हो । यो शुरुवाती समयमै हामीले ३ करोडभन्दा बढी रकम लगानी गरसकेका छौं । यसमा अन्य सदस्यहरुपनि हेल्पिङ्ग ह्याण्डको रुपमा हुनुहुन्छ । सबै शाखा गरेर यहांँ प्रत्यक्षरुपमा ५० जनाभन्दा बढी दक्षजनशक्तिको संग्लग्न हुनुहुन्छ ।
यस क्षेत्रमा के के समस्याहरु छन , यसलाई अझै प्रभावकारीता र विश्वशनीय बनाउन के गर्नुपर्ला ?
समस्याहरु प्राय सबै क्षेत्रमा हुन्छन । तर अरु क्षेत्र भन्दा यो अति संवेदनशील क्षेत्र हो । किनकी एउटा सानो गल्तिले पनि मानिसको ज्यान जान सक्छ । यो सेवामुखी व्यवसाय हो । पछिल्लो समय बिशेषगरी मेडिकल क्षेत्र व्यवसायिक भन्दा व्यापारिक मनसायले फष्टाउंँदै गएको छ । यो एउटा चिन्ताको बिषय छ । हामी के चाहन्छौं भने विरामीहरु हाम्रो प्रयोगशालामा प्रत्यक्ष रुपमा आउन भन्ने हो तर नेपाली समाजमा अझै यो बिषयमा सचेत भएको पाइदैन । त्यसैले विरामी वा सेवाग्राहीहरु सिधै प्रयोगशालामा आउंँदा सर्वसुलभ एवं छुट पाउन सक्छन । साथै अन्य हामीले परीक्षणको बारेमा सेवाग्राहीलाई सल्लाह सुझाव पनि दिने गरेका छौं । यसको प्रभावकारीता ल्याउनका लागि स्वास्थ्यप्रति मानिस सचेत हुनुपर्छ। स्वास्थ्यलाई हामीले त्यति प्राथमिकता दिएका छैनौं । त्यसलै मुख्य कुरा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन हामीले कम्तिमा ६ महिनामा एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु जरुरी छ । जसले गर्दा भविष्यमा आइपर्ने खतराजनक रोगसंँग मुक्त हुन सकिन्छ । र ठूलो खर्चबाट बच्न सकिन्छ । यस क्षेत्रलाई अझ व्यवसायिक र मर्यादित बनाउंँदै लगेमा यसको प्रभावकारीता बढ्दै जान्छ ।